Ndị edemede edere mgbe ọ nwụsịrị | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Berkwụ Alberto | | Ndị edemede, Akwụkwọ
Mgbe m dị obere na m na-agwa mmadụ na achọrọ m ịbụ onye edemede, mmadụ bịara gwa m okwu ahụ "ndị edemede na-akwụ ụgwọ naanị mgbe ha nwụrụ." Taa ahịrịokwu ahụ abịaghachila na-ezute m na enweghị m ike ịche echiche banyere ndị ahụ ndị edemede a ghọtara mgbe ọ nwụsịrị.
6 Ọ bụ Salvador Benesdra
N'ike mmụọ nsọ maka Oscar Wilde, Mark Twain na ọtụtụ puku ndị edemede ndị chọpụtara ọrụ ya, Poe bụ onye edemede America ọ gwara onwe ya ka ọ dịrị ndụ naanị site na ederede. Ebumnuche nke furu ya karịa enweghị ego na nnukwu nsogbu ị withụ mmanya na-aba n'anya, ngosipụta nke ọmụmụ ụfọdụ n'ime akụkọ kachasị mma nke akụkọ ntolite. Ọ bụghị naanị na Poe nyere anyị akụkọ ndị dị egwu, mana ọ gbanwere akwụkwọ akụkọ efu mgbe niile site na iji ikuku na ọnọdụ na-ahụtụbeghị mbụ. N'ezie, site na mgbe ụwa toro ọrụ Poe, onye edemede ahụ anwụworị na 1849.
Onye bu otu n’ime ndi uku ndị na-eche echiche nke mmalite narị afọ nke iri abụọ, onye edemede nke onye Juu aha ya bụ Franz Kafka, nwere ndụ ihe egwu dị egwu nke enyere iwu na ide ihe. Agbanyeghị, onye edemede ahụ gosipụtara mgbe niile ọchịchọ ya ka ebibi ọrụ ya niile ozugbo ọ nwụrụ. O di uto maka uwa, enyi ya Max Brod, onye Kafka nyere oru a, malitere igbasa Metamorphosis site na gburugburu ha. Ihe ndị ọzọ bụ akụkọ ihe mere eme.
Ndụ Emily Dickinson bụ ihe atụ nke ọhụụ na, n'otu oge ahụ, nghọtahie na ụwa dịka nke narị afọ nke iri na itoolu nke ndị na-ede uri ụmụ nwanyị na-amụbaghị, nke ukwuu na uri dị ka nke Dickinson. Kwuru na isiokwu dị ka ọnwụ, anwụghị anwụ ma ọ bụ agụụ mmekọahụ raara nye onye na-ahụ n'anya nke a na-anụtụbeghị, Dickinson ọ dere ihe karịrị puku iri na asatọ n’ime ha naanị ndị iri na abụọ bipụtara site n’aka ndị editọ bụ ndị, na mgbakwunye, na-agbanwe usoro ha oge niile iji mee ka ọ kwekọọ n’ụkpụrụ nke oge ahụ. N'ịkpọchi n'ụlọ n'oge afọ ikpeazụ nke ndụ ya, Dickinson nwụrụ na 1886, ọ bụ nwanne ya nwanyị Vinnie bụ onye ga-achọpụta ihe ruru narị abụ 800 na akwụkwọ ndetu n'ime ụlọ ya.
Mgbe Ndị na-achọpụta ọhịa nwere nnukwu mmata na ngwụcha 90s, ọnwụ Roberto Bolaño na 2003 na mbipụta nke ọrụ ya mgbe ọ nwụsịrị 2666 kpam kpam gbue ewu ewu nke onye edemede Chile. Ọrụ ikpeazụ a, nke akwụkwọ Bolaño nyefere nwunye ya na mpịakọta ise dị iche iche iji hụ na ezinụlọ ga-ebi ndụ, emesịrị bipụtara n'otu mpịakọta nke gafere dịka otu n'ime akwụkwọ Latin Latin kachasị emetụta na narị afọ a. N'ezie, mgbe onye ode akwụkwọ nwụsịrị, ọnụ ọgụgụ nke ụlọ mbipụta akwụkwọ abawanye na 50 na ntụgharị na 49.
Larsson ikpe bụ otu n'ime enweghị enyemaka ikwu kasị nta, karịsịa mgbe ama Swedish edemede nke Millenium saga nwụrụ ụbọchị ole na ole tupu akwụkwọ nke akwụkwọ mbụ, Menmụ nwoke ndị na-ahụghị ụmụ nwanyị n'anya, na mgbe o nyesịrị mpịakọta nke atọ nke saga na onye bipụtara ya, Nwanyị eze ukwu n'obí eze. Millennium saga ahụ ghọrọ ihe ngosi nke ahịa nde dollar ọ bụghị naanị ijere enyi nwanyị na ezinụlọ onye edemede ahụ akwụkwọ, kama ọ ga-anọgide na-etinye aka na saga nke, ọ dị nwute na onye ode akwụkwọ nke etinyegoro n'ime nke anọ olu nke saga.
Ọ bụ Salvador Benesdra
Onye edemede Argentine Salvador Benesdra nwere nsogbu nke nchekasị na nchekasị uche na ndụ ya niile, ọrịa na-arịwanye elu na-ezighi ezi mgbe akwụkwọ mbụ ya, Onye ntụgharị okwu, mmadụ niile jụrụ ya ndị nkwusa lere ọrụ ya anya nke ukwuu ma buru oke ibu. Na 1996 na mgbe ọ dị afọ 4, onye edemede ahụ tụbara onwe ya site na ụlọ nke iri nke ụlọ ya na Buenos Aires, ọ bụ ezie na o nweela oge iji zipu ọrụ ahụ na Onyinye mbara ala. Otu n'ime ndị otu ndị ọka iwu asọmpi ahụ, Elvio Gandolfo, kpebiri ibipụta ọrụ Benesdra site n'enyemaka nke ezinụlọ onye edemede. Taa, a na-ewere Onye Ntụgharị Asụsụ Otu n'ime nnukwu akwukwo nke akwukwo ndi Argentina.
Otu n'ime ikpe kachasị njọ nke onye edemede nke na-amaghị mmetụta nke ọrụ ya na ndụ bụ obere Anne Frank. N'ịbụ onye gbanwere olu nke otu n'ime ihe ndị kachasị njọ n'akụkọ ihe mere eme, Frank bụ nwa agbọghọ onye Juu bụ onye nọrọ site na 11 ruo 13 afọ ekpochi na ebe obibi ke obio Amsterdam ye ubon esie. Mgbe ndị agha Nazi wakporo isi obodo Dutch, nwa agbọghọ ahụ malitere ide na ederede ebe ọ bụghị naanị na ọ bara n'ime esemokwu nke ụwa na-enwe, kamakwa ajụjụ na adị adị nke nwata ọ bụla. Mgbe ọ nwụsịrị n'ogige ịta ahụhụ, naanị onye lanarịrị ezinụlọ ahụ, nna ya Otto Frank, chọtara akwụkwọ akụkọ a kacha mara amara n'akụkọ ihe mere eme.
Ọ ga-amasị gị ịgụ Akwụkwọ akụkọ Ana Frank?
Na February 11, 1963, mgbe ọ dị afọ 30, Sylvia Plath kpọchiri onwe ya n’ime ụlọ ya ma gbanye mmanụ gas ruo mgbe ọ nwụrụ. Ọnwụ nke akwụkwọ na-aga n'ihu na-eru uju, ọ bụ ezie na achọpụtara ya afọ ole na ole gara aga na onye a ma ama na-ede uri tara ahụhụ site na nsogbu, ọrịa nke wepụrụ obi abụọ ọ bụla banyere ọnwụ nna nke ọ na-enwebeghị ike ịkwụsị. Mgbe ọ nwụsịrị, di ya Ted Hughes deziri ihe odide niile Ewezuga akwụkwọ edetu nke gụnyere ihe gbasara mmekọrịta ha. Na 1982, Sylvia Plath ghọrọ onye mbu dere inweta akwukwo Nobel na akwukwo. Otu n'ime ndị edemede na akwụkwọ nwanyị kacha nwee mmetụta dị ukwuu nwụrụ tupu ọ hụ ihe ịga nke ọma nke ọrụ na-arịa ọrịa na nsogbu ego nke onye edemede ahụ ọtụtụ afọ.
Ndị edemede a ndị amata mgbe ha nwụsịrị ghọrọ ihe atụ dị ukwuu nke etu ndị nkatọ nwere ike isi jiri ọrụ kpọrọ ihe n'ụzọ dị iche iche ma ọ bụ maka oge nke, oge ụfọdụ, nwere ike ọ gaghị adị njikere ịnyagharị akụkọ ụfọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Ndị edemede edere mgbe ọ nwụsịrị
Na-efu Cesar Vallejo
Zaghachi Jamil Isaac
Achọrọ m ndị enyi abụọ dị ka Myron Bolitar na Win Lockwood si Harlan Coben